Mushure mekunonoka kupfupi, Samsung nhasi yakazozivisa yayo premium flagship mobile processor, iyo Exynos 2200. Kwenguva yekutanga muExynos series, Exynos 2200 inosanganisira AMD RDNA 2 architecture based Samsung Xclipse graphics processing unit (GPU). Unogona kuverenga nezve Exynos 2200 zvakadzama pazasi.
urongwaExynos 2200 yakavakirwa pa4nm EUV (yakanyanya ultraviolet lithography) maitiro.
GPU: AMD RDNA 2-based Xclipse GPU inotsigira emhando yepamusoro maficha akadai sehardware accelerated ray tracing (RT) uye kusiyanisa chiyero shading (VRS). Aya maficha aimbowanikwa chete pamalaptops, maPC uye emitambo consoles. Iyo Xclipse GPU inouya neyepamberi yakawanda-IP gavhuna (AMIGO) iyo inosimudzira kuita kwese uye kushanda nesimba.
CPU: Iyo octa-core CPU yeExynos 2200 yakagadzirwa mune inotevera tri-cluster chimiro: Imwe ine simba Arm Cortex-X2 mureza-musimboti, matatu kuita uye kunyatsoshanda kwakaenzana Cortex-A710 hombe-cores uye ina-inoshanda simba Cortex-A510 diki- cores.
NPU: Iyo Exynos 2200's NPU kuita kwakapetwa kaviri zvichienzaniswa neyakatangira. Iko zvino inotsigira kurongeka kwepamusoro neFP16 (16bit floating point) rutsigiro mukuwedzera kune simba rinoshanda INT8 (8bit integer) uye INT16.
Modem: Inokurumidza 3GPP Kuburitsa 16 5G modem inotsigira ese ari maviri sub-6GHz uye mmWave (millimeter Wave) spectrum mabhendi. Iine E-UTRAN New Radio - Dual Connectivity (EN-DC), inoshandisa zvese 4G LTE uye 5G NR masiginecha, iyo modem inogona kuwedzera kumhanya kusvika ku10Gbps.
chibatiso: Yakabatanidzwa Yakachengeteka Element (iSE) yekuchengetedza zvakavanzika cryptographic makiyi pamwe nekuita basa seRoT (Root of Trust). Zvakare, inline encryption HW yeUFS uye DRAM yakasimbiswa kuti ive nemushandisi data encryption yakagovaniswa zvakachengeteka chete mukati meiyo dura rakachengeteka.
Kusvika ku200 megapixel (MP).
Pamafuremu makumi matatu pasekondi (fps), ISP inotsigira kusvika 30 MP mune imwechete kamera modhi, uye 108 + 64 MP mune mbiri kamera mode.
Inogona kubatanidza anosvika manomwe emunhu mufananidzo sensors uye kutyaira ina panguva imwe chete kune epamberi akawanda-kamera setups.
ISP inotsigira kusvika ku4K HDR (kana 8K) kugadziriswa.
Yepamberi yemukati-inoziva AI kamera yekuwedzera yakanatswa uye yechokwadi mhedzisiro.
Iyo Exynos 2200's advanced multi-format codec (MFC) inosarudza mavhidhiyo anosvika 4K pa240fps kana 8K pa60fps uye encodes anosvika 4K pa120fps kana 8K pa30fps.
Pamusoro pezvo, iyo MFC inosanganisa simba rinoita AV1 decoder inogonesa nguva yakareba yekutamba.
Iyo yepamberi yekuratidzira mhinduro inoratidzira HDR10+ ichiwedzera inoshanduka siyana uye kudzika kumufananidzo uye inopa zororo mareti anosvika 144Hz kune inoteedzera uye yakapfava yekuchinja chiitiko paunenge uchikwenya kana kutamba mitambo.
Samsung Exynos 2200 tsanangudzo:
Iyo Exynos 2200 parizvino iri mukugadzirwa kwakawanda uye unogona kutarisira kuti ichave mukati meiyo inotevera Galaxy S22 nhevedzano.
ARM's Cortex-X yetsika CPU chirongwa inogona kupedzisira yaita Android mureza wekuita kukwikwidza neApple
Samsung Inoparidza Galaxy S9 uye S9 +